ESI WEGHACHI EGO MAKA EGWUREGWU NA STEAM - STEAM - 2019
Nkwụghachi ụgwọ Nlaghachi ego maka egwuregwu a zụrụ na Steam
The library AEyrC.dll bụ faịlụ nke arụnyere na Crysis 3 egwuregwu. Ọ dịkwa mkpa iji malite ya ozugbo. Njehie ya na akwukwo a nyere gosiri otutu ihe kpatara ya: odighi n'ime usoro ma obu edezi. N'ọnọdụ ọ bụla, ngwọta dị otu, a ga-akọwakwa ya n'isiokwu a.
Dozie AEyrC.dll Njehie
Iji dozie njehie, ị nwere ike iji ụzọ abụọ: regharịa egwuregwu ahụ ma ọ bụ wụnye faịlụ na-efu n'ime usoro ahụ. Mana dabere na ihe ndị kpatara ya, ntinye aka nkịtị nwere ike ghara inye aka, ọ ga-adịkwa mkpa iji usoro antivirus rụọ ọrụ. A ga-atụle nkọwa zuru ezu banyere ihe a nile.
Usoro 1: Reinstall Crysis 3
A chọpụlarịrị na a na-etinye akwụkwọ nchịkọta AEyrC.dll n'ime usoro ahụ mgbe ejiri egwuregwu ahụ. Ya mere, ọ bụrụ na ngwa ahụ na-enye njehie metụtara enweghị akwụkwọ ọbá akwụkwọ a, nkwụnyeghachi nke ọma ga-enyere aka wepụ ya. Ma, ọ bara uru iburu n'uche na ọ bụrụ na e mepee egwuregwu a ikikere, ọ ga-eme ka ọ bụrụ na ihe ịga nke ọma dị otu narị percent.
Usoro 2: Gbanyụọ Antivirus
Ihe kpatara njehie AEyrC.dll nwere ike ịbụ ọrụ nke usoro antivirus, nke ga-aghọta ọbá akwụkwọ a dịka ihe iyi egwu ma tinye ya na klasin. N'okwu a, nkwụnyeghachi nke egwuregwu ahụ na-agaghị enyere ọtụtụ aka, n'ihi na o yiri ka antivirus ga-eme ya ọzọ. A na-atụ aro ka ị gbanyụọ ngwanrọ nje virus maka ogologo oge ọrụ ahụ. Ị nwere ike ịgụ banyere otu esi eme nke a na isiokwu kwekọrọ.
Gụkwuo: Esi gbanyụọ antivirus
Usoro 3: Tinye AEyrC.dll na antivirus okpu
Ọ bụrụ na, mgbe ị na-akwado antivirus, ọ na-etinyekwa AEyrC.dll na nzuzo, mgbe ahụ, ịchọrọ ịgbakwunye faịlụ a na nkwụpụtụ, ma nke a ga-eme naanị ma ọ bụrụ na ị bụ 100% n'aka na faịlụ adịghị ebute. Ọ bụrụ na ị nwere egwuregwu a ikikere, ị nwere ike ikwu n'eziokwu. Ị nwekwara ike ịgụ banyere otu esi etinye faịlụ na antivirus wezụga na weebụsaịtị anyị.
Usoro 4: Download AEyrC.dll
Tinyere ihe ndị ọzọ, ọ ga-ekwe omume ịkwụsị njehie ahụ n'emeghị ihe ndị dị oke mkpa, dị ka ntinyeghachi. I nwere ike ibudata AEyrC.dll ozugbo ma tinye ya na ndekọ usoro. Ọ kachasị mfe iji mee nke a site na ịmegharị faịlụ site n'otu ndekọ gaa na nke ọzọ, dịka e gosiri n'okpuru.
Biko rịba ama na ụzọ na ndekọ usoro na nsụgharị dị iche iche nke Windows dị iche, n'ihi ya a na-atụ aro ka ị buru ụzọ gụọ ntuziaka maka ịwụnye DLL na usoro ahụ iji mee ihe niile n'ụzọ ziri ezi. O kwekwara omume na usoro ahụ agaghị edebanye aha ụlọ akwụkwọ a na-edeghị aha na ya, na nke a, a gaghị edozi nsogbu ahụ. Na nke a, a ghaghị ịrụ ọrụ a na-enweghị onwe ya. Ị nwere ike ịchọpụta otu esi eme nke a na isiokwu kwekọrọ na website anyị.